Iibi Rivet Contact Rivet, Bimetal Rivet, Trimetal Rivet. bimetal rivet Xiriirkani wuxuu leeyahay habsami koronto oo wanaagsan dushiisana laguma ekaan karo oksaydh. Ku darista 3 - 28% naxaas ah ayaa si muuqata u wanaajin karta iska caabinta ololka lacagta.
Rivets adag waa xiraha joogtada ah ee ugu caamsan ee loo isticmaalo maqaarka diyaaradaha iyo darbiyada. Codsiga ka hor, waxay ka kooban yihiin sifiican hawo siman oo wareegsan, madax fidsan oo hal dhinac ah. Waxaan ku siineynaa Rivets Solid Solid oo wanaagsan oo hagayaasha korantada.
U keen samatabbixin, hubin kalsooni, Naqshadeynta madaxa bannaan ee caaryada, jawaab celinta waqtiga ku habboon, Halkii laga qaadi lahaa baaritaanka macaamiisha, Falanqaynta halabuurka hore.
Tri-metal Xiriir Shanghai ZHJ teknoolajiyada Co., Ltd.
Xasiloonida korantadeeda ayaa aad uga wanaagsan sida loo jajabiyo xiriirka muuqaalkeeda iyo booska kaamil ah. Marka la barbardhigo Xiriirka Alxanka, waxay leedahay waqti kuleyl gaaban iyo jawi nadiif ah.
Isukeenista Golaha Alxanka ayaa yareyneysa qiimaha dhammaan wejiyada kala duwan ee soo saarista wax soo saarka, sida naqshadeynta, qorsheynta wax soo saarka, isku dayga, iyo ansaxinta been abuurka.
Badhamada xiriirka Biimalka waxaa lagu bixin karaa noocyo badan oo ah qaabeynta iyo iskudhafka qalabka, Qalabka lakabka shaqeynaya wuxuu noqon karaa Ag, AgCdO ama AgNi, dhinaca Forthe oo loogu sii dari karo alwaaxa wax lagu taageero ama la isku qurxiyo Cu-Ni ayaa la isticmaali karaa, Dhumucda lakabka shaqada ee ugu sarreeya wuxuu ku dhex jiraa nus ka mid ah dhumucda lakabka sare.
Qalabka xiriirka korontada ee loo yaqaan 'cadmium oxide oxide' ayaa si ballaaran loo isticmaalaa, barta dhalaalka yar ee xiriirka ee xiriirada sublimation waxay ka dhigi kartaa dusha qaboojinta xiriirka, isla mar ahaantaana saameyn ku yeelashada, ka hortagga gubashada xiriirka.
AgSnO2, AgSnO2In2O3 xiriirku wuxuu leeyahay faa'iidooyinka adkaanta sare, iska caabbinta sare ee alxanka iyo isku caabbinta gubashada iwm.
Maaddadu waa sheyga ugu fiican ee ilaalinta deegaanka ee lagu beddelo AgCdO.
SHZHJ waxay soo saartaa xiriiro kaladuwan iyo astaamo kale oo habeysan oo loogu talagalay codsiyada kala duwan. Waan buuxin karnaa shuruudaha ugu badan ee loo baahan yahay danab sare iyo shuruudaha nidaamka riixitaanka. Hadday ahaan laheyd tareenkaaga EMD, GE ama ALCO ama gawaaridaada macdanta, waxaad u baahan tahay alaab-qeybiye la isku halleyn karo, SHZHJ waa xulashada ugu fiican adiga iyo shirkaddaada.
XIRIIRADA BIRTA POWDER
Waxaan soo saareynaa siligga siligga ah 'Silver Alloy Wire' oo loo yaqaan 'Alloy Wire' oo loo yaqaan 'Alloys' kala duwan sida AgCdo10, AgCdo12, AgNi10, AgNi12, AgSno2 10 iwm. Waxaan sidoo kale sameynnaa qaabeynta fiilooyinka 'Silver Alloy Fres' sida ku cad qeexitaanka macmiilka, hubinta iska caabinta daxalka, heerkulka sare ee kuleylka iyo korantada.